ရွှေကြို အရွေးမခံရလို့စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ ညီမဖြစ်သူကို ဝိုင်းအားပေးဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
အဆိုတော် ယုန်လေးက ညီမဖြစ်သူ ခိုင်မြတ်သဇင် တစ်ယောက် ရွှေကြိုမှာ အရွေးခံရဖို့ လျှောက်ခဲ့ပေမယ့် မပါခဲ့လို့ ဝိုင်းပြီးအားပေးကြဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
မကြာခင်ကျင်းပတော့မယ့်၂၀၁၉ ခုနှစ်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲအတွက် ရွှေကြို မောင်မယ်လေးတွေကို ရွေးချယ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက အနုပညာမျိုးဆက်သစ်လေးတွေလည်း ဝင်ရောက်လျှောက်ထားကြသလို အခြားသော ဝါသနာရှင်တွေများစွာလည်း ဝင်ရောက်လျှောက်ထားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် ထောင်ပေါင်းများစွာထဲက ရွေးချယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် စကာတင်စာရင်းထဲမှာ မပါဝင်ခဲ့သူတွေလည်း များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။
ယုန်လေးက ဝါသနာပါလွန်းတဲ့ ညီမဖြစ်သူ ခိုင်မြတ်သဇင်တစ်ယောက် နယ်ကနေပြီး ရွှေကြိုလာရောက်လျှောက်ထားခဲ့ပေမယ့် မပါခဲ့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားဖို့ အားပေးလိုက်ပါတယ်။
“ရွှေကြို အရွေးမခံရလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီမလေး ခိုင်မြတ်သဇင်ကို ဝိုင်းအားပေးပေးပါ ။ အယောက် ၈၀ ထဲတောင်မပါတော့လည်း ခံစားရမှာပေါ့ ။ ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုပြိုင်ရင်တော့ နိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်သလို အရူံးကိုလည်း ထည့်တွက်ထားရမှာပေါ့ ။ ပြိုင်ပွဲ တစ်ခု ရူံးတာ အရွေးမခံရတာ တစ်ဘဝ လုံးရူံးသွားတာမှမဟုတ်တာ . ဘဝ နဲ့ ယှဉ်ရင် အရမ်းသေးငယ်တဲ့ အစိတ်ပိုင်းလေး တစ်ခုပါ ။ ဘဝ အတွက် အဲ့ထက် ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ အဓိကကျတဲ့ အရာတွေမှာ အနိုင်ရအောင်ပြင်ဆင်ပါ ။ အခွင့်ရေးဆိုတာ စိတ်ရှိသရွေ့ ကိုအလုပ်ပေါ်စေတနာနဲ့ တန်ဖိုးထားနေသရွေ့ အမြဲအခွင့်ရေး အခွင့်လမ်းက ပေါ်လာမှာပါ ။ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ နဲ့ အမြဲတန်း ကိုယ်ဘက်က Ready ဖြစ်နေဖို့တော့လိုတယ်”
“အမှတ်ပေး ဒိုင်တွေကလည်း အချိန်ပေးပြီး အကုန်စေတနာနဲ့ ကိုယ့်လောက အတွက် လာလုပ်ပေးကျရတာပါ ။ အစထဲက မူကိုပြောထားရင် ကလေးတွေ နေပူထဲမရပ်ရဘူး ။ ရင်မခုန်ရတော့ဘူးပေါ့ ။ ညီမလေး ပြုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အဲ့လိုပဲ အများကြီး မပါသွားတာ Special9နဲ့ တခြား ရုပ်ရှင်တွေမှာ ပါဝင်ဖူးတာရယ် . အသက် ၂၂ နှစ်အောက်တွေကြီးပဲ ရွေးတယ်လည်း ပြောပါတယ် ။ အစတုန်းက ကိုယုန် ရွှေကြို ဘယ်လိုလျောက်ရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ညီမကို ကျွန်တော်ဆူတယ်အားအားယားယားကွာ ဆိုပြီး ဘာမှလည်း မစုံစမ်းပေးဘူး။ ပြီးတော့ Mandalay ကနေ သူဟာသူ အကုန်လုပ်ပြီး အိမ်ရောက်လာတယ် . ရီမောပြီး ထပ်ဆူတယ် အယောက် ၁၀၀၀ လောက်ထဲက ရွေးမှာဆိုတော့ . နင်တော်တော် အားနေတာပဲဆိုပြီး ဒါပေမယ့် သူပြန်ပြောတာလေးတွေကို နားထောင်ပြီး ငါ့ညီမလေး ပါပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေတယ် . သတင်း နားထောင်ပေးနေတယ်”
“ခိုင်မြတ်ပြောတာ သမီး နယ်မှာနေတော့ ချက်ချင်း Ready မဖြစ်တဲ့ အခါမျိုးတွေ ကိုယ်တွေတောင် သူများကို နေရာပေးရတာတွေရှိတာကို။ သမီးမှာ အနုပညာ လူပ်ရှားမူ့ ဘာမှမရှိဖူးလေတဲ့ . ကလေးဆိုတော့လည်း ဘာမှ မလုပ်တတ် . Tiktok ဆော့ . ပုံလေးတွေတင် ဒီလောက်ပဲ ကိုယ်တွေကလည်း တစ်နှစ်နေလို့ မှ ၁ကား ၂ကားပဲ ရိုက်တော့ ပြီးတော့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ လိုက်ဦးမှ အဲ့ဒါဆိုတော့ သူ့အတွက်နေရာမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။သူစိတ်မကောင်းစွာ ပြောတော့ ကိုယ်လည်း စိတ်မကောင်းပဲ ရွှေကြိုမှာ ပါပါစေပဲ ဆိုတောင်းပေးပြီး သတင်းနားထောင်နေခဲ့တာ ။”
“ဗီဒီယို ဆိုတာကြီးကလည်း မရှိတော့ ဂီတဘက်ကလည်း စီးရီး DVD အခွေထွက်တာတွေ ဘာတွေ အရင်လို မရှိတော့ လူငယ်များ အတွက် နေရာတွေ မရှိသလောက်ရှားတယ် လူငယ်တွေ အနေနဲ့ အနုပညာလူပ်ရှားမူ့ တစ်ခုခုဆိုတာနဲ့ အခွင့်ရေးတစ်ခုကို ကြိုးစားချင်ကျတယ် . ဒါလည်းမမှာပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကျရင်တော့ မှားပြီ ။ ဝင်လျောက်ပြီး အရွေးမခံရတဲ့ ညီလေး ညီမလေးတွေကိုလည်း စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကျစရာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ်မပါတာနဲ့ ပါတဲ့လူကို အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ မဝေဖန်ပါနဲ့ တရားသည်ဖြစ်စေ မတရားသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်ကို ကိုယ့်ဟာကို အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ပါ . လေ့လာပါ .အခွင့်ရေးပေးရင် ချက်ချင်းရနိုင်အောင် အမြဲတန်း အဆင့်သင့်ဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားကျပါ။ငါ့ညီလေးတွေ ညီမလေးတွေ ပြိုင်ပွဲ တိုင်းအနိုင်ရနိုင်ပါစေ . အားလုံး Peace ”
ပရိသတ်ကြီးရေ…ရွှေကြိုမှာမပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် အနုပညာလမ်းမှာ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားမယ့် ယုန်လေးရဲ့ ညီမလေး ခိုင်မြတ်သဇင်ကိုတော့ ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးနော်။
ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းက လက် ၅ ချောင်းတောင် မပြည့်ဘူးဆိုတဲ့ နော်ဖောအယ်ထား